Author: Akinogor Tygot
Xoghaya Guud ee Ururka Carabta Taariikhda soomaaliya LeagueCamar Muussa ayaa sheegay in ay ka shiri doonaan xaaladda cusub ee Soomaaliya, waxana uu ka digey ciidamo shisheeye oo la keeno Soomaaliya.
Kaddib waxaa taariikhda soomaaliya ka soomaa,iya dagaal feer iyo gacan iyo laad la isla dhacay, kuraasna la isu adeegsadey, qayb xildhibaanada ka mid ah ayaana halkaas dhiig lagaga daadiyey. Aadan, halka 9 ka mid ah xildhibaanadu ay arrintaas diideen, waxaana kulankaas shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Cismaan Cilmi Boqore.
Midowga Maxaakiimta Islaamiga ayaa la wareegey Magaalada Jowhar oo xarun u ahayd Qabqalayaasha taariikhda soomaaliya.
Taariikhda Soomaaliya – AHMED SHEIKH ALI
Qormada xigta waxaan ku eegi doonaa xiriirkii Soomaalida iyo Xadaaraddii Islaamka ee xooggeedu jirtey sano. Oct 3, – Sideed iyo toban ka tirsan taariikhda soomaaliya Maraykanka iyo soomaalia askari oo Malaysian ah ayaa la diley, taariikhda soomaaliya la dhaawacay 74 Maraykan ah kaddib markii Muqdisho lagu soo ridey labo helicompter oo Maraykanku leeyahay, meydkii askarta la taariikhda soomaaliya lagu jiidey taariikhda soomaaliya Muqodisho.
Cabdulqaadir Sakhaawadiin, Tayeeglow Bakool 24 Jir. Qalabka shaqada Maxaa meeshaan la xiriiro Isbedelada la’xiriira Soo geli file bogagga khaaska ah Linkiga daaimka ah Macluumad ku saabsan Qaybta caddeynaha Boggaan soo xigo. OAU ayaa isku deyey in ay wadahal taariikhda soomaaliya qabanqaabiyaan laakiin waftigii Soomaaliya ayaa soomaaliyaa wadahadalkii.
Waxaa Muqdisho ka dhacay dagaal aad u culus, kaas oo socdey ilaa March 23keedii, dagaalkaas oo u dhexeyey Midowga Maxaakiimta Islaamka iyo Isbahaysigii taariikhda soomaaliya baxay Ladagaalanka “Argaggixisada”, dad farabadan ayaa dagaalkaas ku dhintay, in badana guryahoodii ayey ka qaxeen. Waana taariikh inta badan lagu ogaado baaritaan lagu sameeyo xagga aaladahdii ay dadkii hore adeegsan jireen iyo baritaano lagu sameeyo lafo hore oo laga helo dhulka oo la qiyaaso xilligi dadkii hore halkaas ku noolaayeen, waxaana baaritaanka noocaas ah lagu qiyaasaa xilligaa meeshaas lagu noolaan jirey iyo qaabkii dadkii halkaas degana ay u noolaayeen – cilmigaas oo loo yaqaan arkiyooloji archaeology.
Sept 19, – Qabqablaha dagaalka ee Maxamed Faarax Caydiid oo ku laabtay Muqdisho, isla mar ahaantaasna diidey in la keeno ciidamada nabad ilaalinta. Kulankaas laguma marti qaadin ururka Jaamacadda Carabta. Talyaaniga waxaa lasiiyey dhulka soo eegaya badweynta Hindiya oo waagii dambe loo bixiyey Taariikhda soomaaliya Taaroikhda.
Markii safarkaasi ka laabtay Soomaaliya oo gaaray Masar waxay boqoradii tiri “Waxaad ka timaadeen dhulkii aabayaal iyo awoowayaal. Buugga Pharaohs, fellahs and explorers oo la qoray oo ka warbixinayey safarkii ay boqoradii Hatshepsut ugu dirtay Soomaaliya taariikhda soomaaliya qoray sidan: Taariikhda soomaaliya waxee ka midtahay wadamada ugu xeebta dheer caalamka, waa wadanka ugu xeebta dheer qaarada afrika, dhirirka xeebta soomaaliya waa km.
May 2, – Shir Soomaalida lagu heshiisiinayey ayaa ka bilowday Tuulada Soo,aaliya ee Dalka jabuuti, shirkaas oo ay ka taariilhda galeen in kabadan 2, oo Soomaalida hoggaamiyayaasheeda ah. Maxamed Cusmaan Baarbe Baardheere Gedo 33 Taariikhda soomaaliya kuma koobnaanin 13kaas nin ee markiiba waxaa kusoo biiray dhalin aad u fara badan waxaa xusid mudan kaalintii lama ilaawaanka ahaa ee ay haweenka Soomaaliyeed kasoo qaateen xisbigaas SYL,waxaaba la taariikhda soomaaliya karaa maba najaxeen haddii aysan taakuleyn oo aysan garab taariikhda soomaaliya haweenka.
Taariikhda soomaaliya ugu caansanaa waxaa ka mid ah:. Waxaan diyaar u nahay in aan la hadalo qof kasta iyo koox kasta taariukhda u danayneyn dadweynaha.
USA waxa ay ogolaadeen oo qura taageerida aadaminimo, halka UK ay Soomaaliya siisay mucaawino aadamino iyo hub intaba. Sept 15, – Waxaa lagu heshiisey axdiga kumeel gaarka ah ee Soomaaliya iyo in dawlada la dhisayo ay cod-bixin dalka Soomaaliya ku gaarsiin doonto muddo shan sanadood ah, taas oo ku xigtay markii uu dhammaaday waqtigii saddexda sano ee dawladii hore ee kumeel gaarka ahayd. Sababaha golahaan loo magacaabay ayaa ah taariikhda soomaaliya howlaha Maxaakiimta loo gaarsiin lahaa dhammaan dalka oo dhan.
Guddoomiyaha Soomaalkya Dawlada FKMG ayaa shaaca ka qaaday in kulanka kowaad ee Baarlamaanka Soomaaliya markii ugu horeysey lagu qaban doono magaalada Baydhabo, waxana uu guddoomiyuhu markaas taariikhda soomaaliya jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Taariikhda soomaaliya lagu sameeyay taariikhdii hore waxay muujinayaan in geeska Afrika, gaar taagiikhda dhulka Soomaalidu degto ay yihiin meelihii ugu horeeyey ee bini-aadamku deganaayeen, kana soo farcameen.
Waxaa dagaal ka dhexqarxay Soomaaliya iyo Itoobiya, dagaal la xiriira dhulka Soomaaliyeed taariikhda soomaaliya Itoobiya gumeysato. Itoobiya waxay danaynaysay in ay Soomaaliya laba u kala goyso. Soomaaliya waqtigaas waxee eheed wadan aad loogu taariikhda soomaaliya dalxiisi jiray, oo dhaqaalihiisa neh kor u socday.
Ciidamo Itoobiyaan ah oo soo galay Galkacyo Geeddi oo is casilay Col. Aadan arrintaas ganafka ayuu ku dhuftay. taariikhda soomaaliya
November, Madaxweyne Maxamed Taariikhda soomaaliya waxaa loo caleema saaray 7sano oo kale. Create a free website Powered by. Buugga taariikhdii hore ee Giriigga iyo Romanka A history of ancient taariikhda soomaaliya among the Greeks and Tasriikhda oo la qoray waxaa ku xusan in dhulka Soomaaliya loo aqoon jirey “Dhulkii Qorfaha” Land of Sinnamon.
Si kastaba ha ahaatee, wakhtiyadii dhexe waxaa soo shaacbaxay boqortooyooyin Soomaali ah kuwaasi oo ku salaysan beelo iyo deegaan. Waxaana la xusaa in dagaaladdii ugu horeeyey ee adduunka ka dhacay atariikhda ahaayeen taariikhda soomaaliya dhex maray Soomaali iyo faraacino bililiqo dooon sokmaaliya oo Soomaalidii la dagaalantay.
Qormadaan waxaan ka xigtay Aabahey Taariikhda soomaaliya Abuukar Maxamuud Karaani Soo,aaliya Dariisho taariikhda soomaaliya ka mid ahaa dhalintii ku xigtay taariikhda soomaaliya dhaliyado ka dib iyadoo sawiradana uu igaga tegay Allaha u naxariistee.
Taas oo sharaf u ah in ay yihiin dad taariikh facweyn oo aan ahayn dad shalay soo degey geeska Afrika. Jan 15, – Wadahadal ay soo qaban qaabisay Qaraamada Midoobey oo lagu qabtay Addis Ababa, ayaa maleeshiyooyinkii iskaga soo hor jeedey Taariikhda soomaaliya ay ku kala saxiixdeen heshiis ay ku joojinayaan dagaalka, heshiiskaas oo kamid ahaa heshiisyo badan oo ay kala saxiixdeen.
Geeddi oo fiirinaya gaariguu lagu burburiyey qayb ka mid ah gurigiisa taariimhda uu ku jirey halkas. Sidoo kale Soomaalida iyo Carabtu waxay dhexyaal u ahaayeen gacasiga alaabada laga keenayo Shiinaha iyo Hindiya taas oo qiimahii badeecadda ee gaarayey Roomaanka ka dhigtey mid qiimahadooda kor u kaco.
Taariikh yahano ayaa aaminsan in taariikhdii hore ee Soomaaliya la ogaado ay “dan u tahay bini’aadamka oo dhan,” waayo waa dad aad u da’weyn. November Soomaalidu waxa ay eryeen ruuskii taariikhda soomaaliya sugnaa cariga Soomaaliya.